अन्ततः जे नहुनु थियो त्यहि भैदियो‘! – Himal eNews
अन्ततः जे नहुनु थियो त्यहि भैदियो‘!
काठमाडौं । नेपालमा बेलायतमा देखिएको ‘नयाँ भेरियन्ट’ फैलँदो क्रममा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बेलायती प्रजातिको भेरियन्ट फैलि“दो क्रममा रहेको भन्दै बालबालिका उच्च जोखिममा रहेको जनाएको छ ।
बालबालिकामा कोरोना संक्रमणदर उच्च वृद्धि हुँदै गएकोसमेत पाइएको छ । केही दिनयताको तथ्यांकअनुसार दैनिक संक्रमितमध्ये १० प्रतिशतसम्म बालबालिका छन् । यसमा पनि बेलायती भेरियन्ट देखिएको छ । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा। आरपी विच्छाले बालबालिकामा संक्रमणदर बढेको प्रस्ट पारे । सो अस्पतालमा तीन संक्रमित बालबालिका भर्ना भएका छन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा भेरियन्ट फैलिनेक्रम जारी छ । बेलायत, साउथ अफ्रिका र ब्राजिलमा पत्ता लागेको भेरियन्ट छिमेकी देश भारतमा समेत देखिएको छ । बेलायती प्रजाति विश्वका १ सय २९ देशमा फैलिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धुलिखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभागका निर्देशक डा। विराज कर्माचार्यका अनुसार भारतमा संक्रमणदर उच्च रहेको भन्दै नेपालमा पनि भयावह स्थिति आउन सक्नेछ ।
‘संक्रमित संख्या बढ्दै गएको छ, अहिले टेस्ट पोजेटिभ दर पनि बढेको छ,’ कर्माचार्यले भने, ‘परीक्षण दर बढाउन सकिए संक्रमित संख्या बढ्नेछ ।’ कर्माचार्यका अनुसार बेलायती प्रजातिको सर्ने दर ४३ देखि ९० प्रतिशतसम्म छ । यो संक्रमण समुदायमा फैलिए भयावह अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । बेलायती प्रजातिमा लक्षण देखिने सम्भावना अन्य प्रजातिभन्दा बढी रहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बालबालिका नयाँ भेरियन्टको जोखिममा छन् । भेरियन्ट समुदायमा फैलिरहेको भन्दै परीक्षण गराउन जनस्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा ‘डबल म्युटेसन भेरियन्ट’ कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसको पुष्टि गरेको हो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा। पौडेलका अनुसार हङकङमा पठाएको नमुना परीक्षणमा ‘डबल म्युटेसन भेरियन्ट’ पुष्टि भएको छ ।
सरकारले नेपालमा नयाँ प्रजातिको भारइस फैलिएको हुन सक्ने भन्दै ‘जिन सिक्वेन्सिङ’का लागि नमुना हङकङमा पठाएको थियो । ‘एस जिन नेगेटिभ’ भएका १० नमुनामध्ये ९ वटामा ‘यूके भेरियन्ट’ पुष्टि भएको हो । राजधानी दैनिकमा यो खबर छ ।
‘डबल म्युटेसन पुष्टि भएको नमुना ललितपुर जिल्लाको हो,’ डा। पौडेलले भने, ‘यसबाट पनि नेपालमा यूके भेरियन्ट फैलिसकेको पुष्टि हुन्छ ।’ बुधबार नै देशभर ६ सय ३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमका अनुसार ५ सय ८० जना पीसीआर र २३ जना एन्टिजेन पोजेटिभ आएको हो ।
चन्द समूहका नेता उमा भुजेल र पौडेल रिहा भएलगत्तै फरार
एमसिसी परियोजनाकाे रकम दुई वर्षमा ७ अर्ब खर्च !